Accueil > Gazetin'ny nosy > Norbert Ratsirahonana: Rain’ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara
Norbert Ratsirahonana: Rain’ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara
Amin’izao fotoana izao dia mandeha dia mandeha ny resaka fa ingahy Norbert Lala Ratsirahonana indray no nahatonga ny tsy fahatanterahan’ny fanonganana an’ingahy Hery Rajaonariamapianina izay efa dradrain’ny Malagasy manontolo fa tsy maintsy miala amin’ny toerany. Voalaza fa isan’ny olona izay nanipy hevitra amin’iny fanapahan-kevitry ny HCC iny izy raha ny loharanom-baovao. Isan’ny nanambara ihany koa ny loharanom-baovao avy amin’ireo mpitolona miaraka amin’ireo depiote 73 ao amin’ny 13 may fa ingahy Ratsirahonana Norbert Lala no isan’ny nametraka ny fanamafisana ny fampiharana ny andininy faha 54 amin’ny Lalàmpanorenana amin’ny andininy voalohany. Nety ho an’ny Mapar izany, hoy ihany ilay depiote izay nirehareha fatratra fa ingahy Ratsirahonana izao efa nivadika any amin’ingahy Andry Nirina Rajoelina indray.
Tsy olana izay fivadibadihany izay satria efa toetra raiki-tapisaka aminy sy nolovainy tamin’ireo ray aman-dreniny tany aloha tany izany. Ho an’ny Malagasy dia mitarika korontana eto amin’ny firenena hatrany ny fidiran’ity rangahy ity amin’ny raharaham-pirenena toa izao. Toa izao no nanonganany an’ingahy Zafy Albert ary nanindrahindrany an’i Didier Ratsiraka raha toa ka tafaverina amin’ny fitondrana indray ny Amiraly tamin’ny taona 1996. Nalaza dia nalaza ilay oha-pitenenana hoe « midira midira ny akanganay izay lasa omaly ka tonga indray » ho fandraisana an’ingahy Ratsiraka teny Iavoloha tamin’ny fametrahan azy amin’ny fomba ofisialy ho filohan’ny repoblika indray ny taona 1997. I Zafy Albert nefa dia namany akaiky tamin’ny tolona 1991 rehefa nanongana an’i Didier Ratsiraka izy nefa dia novadihany tampoka teo.
Mbola izany koa no nataon’ingahy Norbert Lala Ratsirahonana tamin’ny 2001 ka nanonganany indray an’i Didier Ratsiraka izay niarahany tamin’ingahy Ravalomanana Marc. Nampidiriny amboletra ho filoham-pirenena ity rangahy ity tamin’izany ka nampalaza ilay resaka hoe “1er tour dia vita” na dia tsy nandresy tamin’ny fihodinanan voalohany aza ingahy Ravalomananan ny taona 2001 iny.
Mbola ingahy Norbert Lala Ratsirahonana ihany no nanongana an-dRavalomanana ny taona 2009. Nihazakazaka namonjy an-dRajoelina izy rehefa hitany fa ho resy ingahy Ravalomanana ka nanao mpanolotsaina an’i Andry Rjoelina indray. Tamin’izay fotoana izay indray raha nanao valan-dresaka tao an-tranony tao Ambatoroka izy dia izao indray no filamatra noteneniny tamin’ny mpanao gazety: “Notoroiko tsy nety ka aleo ho hitan’ny havany eo”. Telo andro taorian’ny fanambarany dia iny niaraha-nahita iny ny fandosiran’ingahy Ravalomanana Marc tany Afrika Atsimo.
Izany no tantaran’ingahy Ratsirahonana Norbert Lala amin’ny pôlitika eto Madagasikar. Izy no fototra ny tsy fahombiazan’ny fanovana eto amin’ny firenena. Toa ny voan’ny fandraikirekena ny filoha telo nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’ny taona 2018 noho ny nataony. Tena manaiky azy avokoa ireo ambaniandro telolahy nifandimby teo ka nanao azy mpanolotsaina manokana tao an-dapa hatrany. Tandapa noho ny fanonganam-panjakana hatrany ity rangahy ity hatramin’izay ary izao efa manao ny hataony izao indray ka manampy ny Mapar ny Andry Rajoelina indray.
Tsaroana ny tenin’ingahy Germain Rakotonirainy izay MFM tamin’ny taona 1996 raha nilaza hoe: “raha mbola eo Ratsirahonana dia tsy hisy raharaha vanona eto Madagasikara”.